Tsara ve ny bisikileta orbea avant? - Hevitra
Tena > Hevitra > Orbea avant famerenana - mitady vahaolana
Orbea avant famerenana - mitady vahaolana
Tsara ve ny bisikileta orbea avant?
Amin'ny ankapobeny, nyTalohan'nytolotra maharesy lahatra tokoa, ary ny mpifaninana akaiky indrindra aminy ao amin'ny làlanaBisikiletany sokajy Taona dia ny Fuji Gran Fondo mifantoka tsara ihany koa. Raha tsy anao ny hazakazaka ary mitady milina fiaretana maivana sy ahazoana aina ianao dia ity hatsaran-tarehy vita Basque ityTSARAmendrika hodinihinao.
hiit ny fiaretana
Novolavolainay ny Avant ho an'ny mpamily izay te handresy ny dia rehetra. Ny géometry bisikileta izay mampihena ny havizanana ary mamonjy angovo dia tonga lafatra amin'ny fanamby lehibe indrindra, ny fond fond, ny cobblestone epics ary ny hetsika marathon izay mitaky fiaretana sy fifehezana faran'izay betsaka ho an'ny sehatra fiaretana, izay niafara tamin'ny fanadihadiana nandritra ny taona maro momba ny fomba tena ahafahan'ny bisikileta manampy. mitondra fiara lava kokoa. Ny ergonomia sy ny zava-bita no antony manosika ny fampandrosoana azy.
Ny freins mekanika na elektronika miova amin'ny alàlan'ny fivezivezena anatiny sy toerana ho an'ny kodiarana 28c dia mitondra an'i Avant saika amin'ny toerana mety alehanao. Izahay dia mirehareha amin'ity milina fiaretana tonga lafatra ity, ny Avant maivana indrindra indrindra ary indrindra indrindra. Avant no safidy ho an'ny mpitaingina mikaroka bisikileta miaritra maivana miaraka amin'ny fahombiazana sy ny endriny tsara indrindra.
Izy ireo dia mitady ny fampiononana sy ny fahamendrehana izay mety tsy ho hitany amin'ny bisikilety toy ny Orca. Ampiasainay ny fananganana karbaona mandroso indrindra amin'ny teknolojia misy ahafahana mamela ireo sary mitaky fatratra. Ny dingana sarotra sy be pitsiny miaraka amin'ny valiny izay ho tianao avy hatrany dia ny lasely.
Ny fanamafisana dia mihatsara amin'ny endrika vaovao ary ny fananganana EPS, ny sela miampita sy ny fametrahana karbaona nohavaozina dia niteraka fanarahan-dalàna mihombo kokoa aza. Advantage Endurance dia geometry Teraka nandritra ny taona maro ny famakafakana ny fomba ahafahan'ny ergonomics manampy anao hifantoka hatrany amin'ny aerodynamika, ny ergonomika fiaretana dia miteraka bisikileta izay mora kokoa ny mitaingina ary mampitombo ny fiaretana. Ny fikirakirana dia marim-pototra sy intuitive, ny zoro sy ny refy dia dinihina tsara amin'ny haben'ny habe hanamafisana ny fampiononana ataon'ny mpandraharaha.
Ary ny fampiononana bebe kokoa dia midika fa ny dia lavitra ataon'ny mpamily no hery lehibe mihetsika amin'ny frame. Ny bisikileta dia tsy afaka mampitombo ny fidiran'ny mpitaingina azy. Ka ny tanjona dia ny hamolavola rafitra mahomby izay mamindra herinaratra araka izay azo atao amin'ny kodiarana any aoriana.
Ny hery ivelany amin'ny frame izay mitranga rehefa misy fiantraikany amin'ny fanadihadiana sy fifehezana ny fikororohana na ny hovitrovitra. Ny fitondran-tena amin'ny zana-kazo eo ambanin'ny lanjan'ilay mpitaingina dia manakiana ny fampitana ny fifindran'ny herinaratra mankany amin'ny firafitry ny endriny ambony. Ny haavon'ny haavon'ny clevis dia mitombo amin'ny fantsom-pifandraisana fohy kokoa mba hitazonana ny refy mifangaroharo.
Ireo freins ireo dia ahafahanao mijanona haingana kokoa miaraka amin'ny fampiasana mekanika lehibe kokoa ary tsy misy fiantraikany amin'ny fantsom-pifandraisana. Ny freins disc dia manome hery bebe kokoa; Hery izay afaka mampiasa ny tady tsara kokoa natolotry ny kodiarana 25mm lehibe kokoa izay mihazakazaka amin'ny tsindry ambany kokoa izay lasa mahazatra amin'ny peloton maoderina. Ireo tombony ireo dia mazava ho azy fa misy ihany koa ho an'ny mpamily tsy mihazakazaka amin'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fampitomboana moramora ny herin'ny freins mba hahatonga ny lalana iray malama sy mihombo noho ny freins de rim.
Na iza na iza manana olana amin'ny fampifangaroana ny fitambaran-damba tsara amin'ny sisin'ny freins dia tsy fantatra ny fahatsapana fa misintona na mametaka freins alohan'ny fihodinana amin'ny toe-javatra mampatahotra ny hafainganam-pandeha mafy. Ireo kapila sy paoma novakiny ireo dia tsy notafihan'ny hamandoana toy ny peratra vaky. Izy ireo dia manolotra herinaratra sy modulasi mitovy amin'ny andro orana toy ny amin'ny toetr'andro maina.
Raha tsy misy ny fahatarana eo amin'ny fampiharana ny herin'ny freins sy ny fahatsapana ny fiovan'ny hafainganam-pandeha izay iraisana amin'ny frein de rim betsaka, amin'ny ankapobeny tsy misy ahiahy ny fihenan'ny rim sy ny kodiarana mandritra ny freins maharitra, manala ny mety tsy fahombiazan'ny hafanana. Ireo ampahany sy pad ireo dia tsy voakasiky ny hamandoana mitovy habe amin'ny peratra vaky. Izy ireo dia manolotra herinaratra sy modulasi mitovy amin'ny andro orana toy ny amin'ny toetr'andro maina, tsy misy fahatarana eo amin'ny fampiharana ny herin'ny braking sy ny fahatsapana fiovan'ny hafainganam-pandeha izay mahazatra amin'ny freins rim.
Fantatrao rehefa nanomana ny diany ianao dia ho andro lava ity: fiakarana mihanika sy fidinana miolakolaka, lalana mahatsiravina miaraka amin'ny maro izay mahalala ny zavatra hafa. Tsy mitafy fahafinaretana ho an'ny ankamaroan'ny olona ireo mitaingina fiara ireo, fa azo antoka fa tsy hay hadinoina, be mpampiasa, ary sarotra. Izany ve no antony hitohizanao? manaova kafe hafa ary apetaho ireo sohoho hitazomana ny toetr'andro ho levona sy hanafana afaka adiny roa angamba.
Raiso ny Avant anao ary manaova fizahana haingana alohan'ny hidiranao amin'ny zavona maraina. Tsy misy milina hafa afaka manampy anao hiaritra ny ora maro amin'ny fepetra henjana sy mandreraka. Ho lava andro izao ary ho tianao izany.
kona mahuna famerenana
Tonga hanaiky ny fanamby?
Aiza no anaovana bisikileta orbea avant?
Manao bisikileta miaritra ve i Orbea?
Natao hanomezana fampiononana noho ny mitaingina lava, nyOrbeaAvant H60 Disc mifanaraka amin'nyOrbea'sisan-karazany toy nyfaharetanalalanabisikileta. Mbola, miaraka amin'ny traikefa 100 taona mahery,Orbeafarafaharatsiny mahazo ny toerana vaulted ho ny zokiny faharoabisikiletampanamboatra eto amin'izao tontolo izao.
Orbea dia marika bisikileta tsara?
Eny,Orbeadia tenatsaralalanamarika bisikileta. Vita avy amin'ny fitaovana karbônina sy alimina mandroso izy ireo ary namboarinany tsara indrindrasinga manodidina. Nihazakazaka ny ekipa UCI Professional Continental Cofidis Solutions Cr? DitsOrbeabisikileta amin'ny vanim-potoana 2016 sy 2017, izay milaza betsaka momba ny kalitaon'ny bisikileta.24 2021.
Marika tsara ve i orbea?
Eny,Orbeadia tenatsarabisikiletamarika. Vita avy amin'ny fitaovana karbônina sy alimina mandroso izy ireo ary namboarinany tsara indrindrasinga manodidina. Nihazakazaka ny ekipa UCI Professional Continental Cofidis Solutions Cr? DitsOrbeabisikileta amin'ny vanim-potoana 2016 sy 2017, izay milaza betsaka momba ny kalitaon'ny bisikileta.24 2021.
famerenana famindrana amboahaolo
Mahazo bisikileta gravel ve i orbea?
nyOrbea GainD31 ElectricBisikileta vatokely2020 dia herinaratra marobebisikiletaizay mikendry ny hanatsara ny dianao fa tsy hanjakazakana. mifantoka amin'ny endrika maoderina, mifangaro sy marevaka izay vonona amin'ny làlana na lalan-kaleha.
Orbea high end?
Orbeadia orinasa iray izay efa niasa hatry ny ela. Ny anarana dia lasa mitovy hevitra amin'nyavo-tapitrabisikileta fampisehoana ampiasaina amin'ny hazakazaka amin'ny haavo amateur sy matihanina.24 2021.
Inona no tokony ho fantatra momba ny avant Orbea vaovao?
Zavatra tokony ho fantatra momba ny Orbea Avant 2021. Voamarika ho bisikileta fiaretana vaovao ataon'i Orbea, ny Avant dia manisy fefy aliminioma misy fantsom-boribory telo sy hydroformed raha toa ka hita (na tsy hita) eo amin'ny tonon-taolana ny lasitra milamina malefaka. Tamin'ny voalohany, dia mamaky toy ny kinova mora kokoa amin'ny bisikileta vaovao Orca OMX vaovao,
Bisikileta tsara ve ilay Orbea avant M30?
Tsy mila mijery lavitra noho ny Orbea Avant M30 2018. Ho an'ny iray, Orbea dia anarana azo itokisana eo amin'ny tontolon'ny bisikileta an-dalambe nanomboka tamin'ny 1840. Ny bisikiletany dia feno endri-javatra izay miantoka ny fiarovana sy fampiononana an'ny mpitaingina ary amin'ny Mandritra izany fotoana izany dia mahazo traikefa mitaingina mahafinaritra ianao.
Inona no karazana fanadiovana Tyro ananan'ny avbeaa Orbea?
Tahaka ny 2021 Trek Domane AL izay nambara vao haingana, ny Avant dia manohy lohahevitra iray ho an'ny bisikilety mora vidy kokoa izay manome tati-bato ho an'ny fahamaotinana, fa tsy manandrana manahaka mora fotsiny ny bisikileta karbaona avo lenta. Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hatramin'ny 35mm, ny Avant Disc dia afaka mitondra anao eny an-dàlana mankany amin'ny vatokely maivana koa.